Wararka Maanta: Arbaco, May 22, 2013-Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay bandhig-dhaqan oo lagu qabtay Magaalada Konya ee Dalka Turkiga (SAWIRRO)
Bandhig-dhaqameedkan oo dad kala duwan ay hidahood iyo dhaqankooda kusoo bandhigeen ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto; waxaa soo qaban-qaabisay hay’ad Islaami ah oo lagu magacaabo Mevlana Uluslararası Öğrenci derneği.
Madax sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa kasoo qaybgalay bandhigga wuxuuna socday muddo saddex maalmood ah; waxyaabihii halkaas lagu soo bandhigayna waxaa ka mid ahaa cunnada ay Soomaalidu caanka ku tahay ee canjeerada loo yaqaan.
Arrinta xusidda mudan ee soo jiidatay dadkii kasoo qaybgalay bandhiggan ayaa waxaa wacdaro ay halkaas ka muujiyeen arday iyo dadka Soomaalida ah ee ku nool mmagaalada Konya, iyagoo soo badhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo aad loo jeclaystay.
Ciyaaro dhaqmeedka Soomaalida ee lagu soo bandhigay bandhiggaas ayaa waxaa ka mid ahaa: dhaantada oo ay aad ula dheceen dhammaan dadkii ku sugnaa halka lagu qabanayay bandhiggan.
Sidoo kale, waxaa xusid mudan in dadka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in ay kaalinta koowaad ka galeen bandhigga taasoo sharaf weyn u soo jiidday guud ahaan Soomaalida ku nool dalka Turkiga iyo Soomaalida oo dhan.
Fannaaniin Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Konya ee dalka Turkiga ayaa goobta ka qaadeen heeso waddani ah oo aad ay ula dhaceen dadkii lagu casuumay bandhig-dhaqmeedkaas oo ay ku jireen kuwo Turki ah.
Dalka Turkiga ayaa xilliyadii ugu dambeeyay lagu qabanayay bandhigyo noocan oo kale ah, kuwaasoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo ay dadka Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool ka qaybqaataan ayna guulo waaweyn kasoo hoyeen.
5/22/2013 9:09 AM EST
Shir hordhac ah oo loogu gogol Xaarayo shirweynaha dib u dhiska Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.